Nhau - 6 Anogadza Zvakanaka Mapombi Mapombi Anogamuchirwa Zvakanaka neEVOMEC
6 Inoisa Zvakanaka Mapombi Mapombi Anogamuchirwa Zvakanaka neEVOMEC
Kuyerera kweTongke kwakapihwa maseti matanhatu etsime pombi seti yeEVOMEC muna 2019. Ndiwo mavhiri maviri anotakurika mhando yakaoma wega priming dhiziri injini mhando. Pombi pombi: SPDW150, Kugona: 360m3 / h, Musoro: 28 m, uye zvakare nepombi zvikamu uye tsime poindi. EVOMEC ndiye mutungamiri muunyanzvi hwakawanda hweinjiniya, kuvaka uye oiri uye gasi masevhisi neupamhi husingaenzanisike hwehunyanzvi kuenzanisa chiyero chehunyanzvi hwedu uye nekukura kwemasevhisi edu mune chero chirongwa chingave pasi kana pagungwa. Ivo vane yavo timu yeinjiniya uye vane hunyanzvi uye isu tinofara kwazvo kushanda navo.
Kana zviri zvakakomba zvepasirese pandemi, isu hatigone kutumira mainjiniya enzvimbo yebasa. Mushure mekuedza kwemativi ese uye kutaurirana pamhepo. Isu takagadzirisa dambudziko rekuti pombi yepombi yekupisa yakanyanya kukwirira pasi pekupisa kwekushanda mamiriro.
Isu tinofara kuti iyo pombi inoisa mashandiro mushe uye yakawana tsamba yekufara:
"Ini ndakakwanisa kumisikidza zvese zvitanhatu zviyuniti uye ndakaedza matatu acho ari kunyatsoshanda anoshamisa !! (mavhidhiyo nemifananidzo iri kuuya munguva pfupi).
Ndinotenda chose mumwe nemumwe wenyu aenda mamaira ekuwedzera kuzadzisa izvi. Ndatenda zvikuru!
Sekuzivikanwa kwezvishongedzo, tsime mapoinzi (mafirita) panogadzirwa zvisirizvo, ndatenga mafirita matsva kuti ndigadzirezve (mifananidzo yakasungirirwa) mune imwe kushandisa zvikamu.
Ini ndichave ndichida kutenga zvimwe zvikamu senge injini injekiseni / mapombi emapeturu, masenji, maImpellers nezvimwewo Nezve izvi, Unogona here kunditumira zvikamu / zvinyorwa zvekuchengetedza kana chero magwaro anogona kubatsira kugona kuziva zvikamu zvakanaka saizvozvo. "
Tinotenda nekuvimbika kwevatengi uye kuvimba, isu ticharamba tichiedza kuyedza kupa vatengi zvigadzirwa zvirinani nemasevhisi.